प्रेम सम्बन्धकै कारण पूजा चर्चामाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रेम सम्बन्धकै कारण पूजा चर्चामा
फिल्मी फण्डा । फिल्मी वृतमा निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेत्री पूजा शर्मा विच प्रेम छ भन्ने हल्ला चल्ने गर्दछ । पूजाले सुदर्शन थापाद्धारा निर्देशित फिल्महरु मात्र गर्ने गर्थिन, त्यसो हुँदा उनीहरु बीच प्रेम रहेको कुरामा बल मिलेको थियो । तर, अहिले पूजा होम प्रोडक्सन र थापाक्याम्प भन्दा बाहिर निस्केकी छिन् ।
फिल्म प्रेमगीतबाट लाइमलाइटमा आएकी यी नायिका दर्शक माझ लोकप्रिय छिन् । फिल्म रिलिज हुँदा होस् या कन्ट्रोभर्सीले भएता पनि मिडियामा प्राय पूजा छाइरहेकी हुन्छिन् । उनी प्राय फिल्महरूमा आफ्नो को – एक्टरहरुसँग नजिक नै हुने गर्छिन् । तर बिडम्बमा फिल्म रिलिज पश्चात् ती नायकहरूसँग पूजाको सम्बन्ध खासै राम्रो हुँदैन । जुन उदाहरण पूजाका अघिल्ला नायक प्रदीप खड्का र पल शाह हुन् । तर पछिल्लो समय पूजाको निकटता नायक आकाश श्रेष्ठसँग निकै छ । अन्तरवार्ताहरूमा पनि पूजा आकाशको निकै तारिफ गर्ने गर्छिन् । आकाश जस्तो को – एक्टर पहिलो चोटि पाएको पूजा बताउने गर्छिन् । त्यस्तै आकाश पनि पूजाको तारिफ गरेर थाक्दैनन् ।
उनीहरु यस अघि फिल्म रामकहानीमा देखिएका थिए भने अर्को फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मनमा दोहेरिएका छन् । त्यस्तै उनीहरु अर्को फिल्म पोई पर्यो कालेमा पनि देखिँदै छन् । को–एक्टरसँग प्रायः नदोहोरिने पूजा आकाशसँग भने ब्याक टू ब्याक दोहोरिदै छिन् । जो सँग काम गर्यो उसैसँग पूजाको चर्चा चाँही हुन्छ । प्रेमकै कारणले भएपनि पूजा सँधै चर्चामा आइरहन्छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : गलबन्दी चोरी काण्ड – सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसदसम्म
फिल्मी फण्डा । प्रकास सपूतको गीत गलबन्दी २०४८ सालमै रेकर्डिङ गरिएको गायक शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो’ सँग लय मिल्न गएको आरोप लागेको छ । गीतलाई लिएर शम्भु राईले मुद्दा हालेका छन् । जसमा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यलयले छलफलमा कुरा मिलाउन बुधबार सम्मको समय दिएको छ । अझ जातिय विषयलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् ।
गीतलाई चोरी आरोप आइरहँदा गीतलाई लिएर जातियताको गन्ध मिसाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नेता एवं पूर्व मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले संसदमा ‘गलबन्दी’ गीतको विवाद बारेमा बोलेका छन् । ‘मेरो लय नक्कल गरिएको भनेर मुद्दा हालेछन्’ विश्वकर्माले भने, ‘हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको लोकलय पुर्खाले गाएको गीतलाई पछिल्लो पुस्ताले सिक्दै पछिसम्म जीवित राख्ने हो ।’ उनले एक पुस्ताले एकपल्ट गाएको गीत एकपल्ट मात्र रेकर्ड हुन्छ भने लोक भाका नहुने बताए ।
प्रकाश सपूतको गीतको समर्थन उनले भने गाउँघर, रोदि, मेलापातमा जाँदा यो गीत स्वतः गाउने भाका नै लोक लय हुन्छ । उनले प्रकाश सपूतको गीत कुनै पनि भाकासँग मेल नखाने पनि दाबी गरे। शम्भू राईले सामान्य कलाकारले गरेको काममा चोरी गरेको भन्नु लज्जास्पद रहेको उनले बताए ।
राईका मतियारहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै प्रकाश सपूतलाई अति निच गाली गर्दै जातीय विभेदपूर्ण शब्द प्रयोग गरेको भन्दै मीनले निन्दा गरे । संविधान, सदभाव र कानूनको विरुद्ध हुने गरी दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी अपमान गरेको हुनाले साइबर कानून अन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐन २०६८ अन्तर्गत र संविधानको धारा २४ अन्तर्गत कारवाहीको माग गरे ।उनले आरोपीलाई कानूनी कारवाहीमा नल्याए सम्पूर्ण दलितहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् । त्यस्तै कलाकारहरुले पनि यस विषयमा आफ्नो धारण सामाजिक सञ्जालमार्फत राखिरहेका छन् ।
यसअघि गायक शिव परियार र कलाकार जितु नेपालले आफ्नो धारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै राखेका थिए । कलाकार मनोज गजुरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘मलाई मन पर्ने दुई पुस्ताका दुई गायक, ठूलो र सानो यो भेदभाव ठालुले चलाए, गरिबको श्रम लुटेर खाने चलन चलाए, काम गर्ने सानो, काम ठग्ने ठूलो म भन्दै भन्दिनँ, जाती र पाती छुट्याउने रीतलाई म मान्दै मान्दिनँ ।’ भन्दै चेतना फैलाउने अग्रज गायक हुन् आदरणिय शम्भु राई । प्रकाश सपूत भाइ पनि संघर्षको भट्टिबाट उत्पादन भएका प्रतिभाशाली कलाकार हुन् । आ आफ्ना गुनासो असमझदारीलाई आपसी संबादद्वारा समाधान गरौं । समाज, संविधान र बिज्ञानले चिहानमा पुरी सकेको ’छुवाछुत’को लासलाई ब्युँतिनबाट रोकौं ।
प्रेम हाम्रो धर्म हो, मानिस हाम्रो जात, जात धर्म मिलेपछी सबले मिलाऔं हात ।’
गायक प्रमोद खरेलले पनि आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखेका छन् । उनले लेखेका छन् – ‘दिल नभएका हरु साथका कुरा गर्छन, विरुवा नरोप्ने हरु पातका कुरा गर्छन, रगत एउटै सास एउटै जुनी एउटै यहाँ विवेक नभएका हरु जातका कुरा गर्छन’ । त्यस्तै कलाकार केदार घिमिरेले पनि ‘जात भातको कुरा त धेरै पुरानो हो । अहिले सुहाउँदैन’ भन्दै स्टाटस लेखेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : लक्की वर्षा
फिल्मी फण्डा । वर्षा राउत अभिनित फिल्म दाल भात तरकारीले राजधानीका तीन सिंगल थिएटरमा प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाएको छ । उनी अभिनित अर्को फिल्म जात्रै जात्रा पनि मल्टिप्लेक्स हलहरुमा पनि प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाउने रफ्तारमा छ ।
समीक्षकको नजरमा नरुचाइए पनि दाल भात तरकारीले प्रदर्शनको ५१औँ दिनको सफलता प्राप्त गर्यो । फिल्ममा अभिनय गरेकै कारण न वर्षाले वाहावाही पाइन् । यस्तै फिल्महरुमा अभिनय गरिरहे वर्षाको करियर ओरालो लाग्ने आँकलन गरिएको थियो । अपेक्षित र प्रतिक्षित फिल्मले अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिन सकेन । तर, वर्षा अभिनित अर्को फिल्म जात्रै जात्रा चौतर्फी तारिफ बटुल्यो । ससीक्षको नजरमा फिल्म हर हिसाबले अब्बल रह्यो । दर्शकको खडेरी परिरहेको समयमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म हेर्नको लागि टिकट नपाएको गुनासो दर्शकबाट आयो । फिल्म सफल रह्यो ।
जात्रै जात्रा प्रदर्शनकने ५१ औँ दिन पार गर्ने आँकलन गरिएको छ । यदि जात्रै जात्राले पनि ५१ औँ दिन पार गरेका खण्डमा वर्षालाई खुशी मिल्नेछ । अभिनयमा आलोचना वा प्रशंसा पाए पनि वर्षा लक्की नै हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : जता पुष्प त्यतै आँचल
फिल्मी फण्डा । राजधानीका तीन सिंगल थिएटरमा प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’का नायक पुष्प खड्का र नायिका आँचल शर्मालाई एउटा फिल्मबाट पर्दामा दोहोरिन अफर आएको थियो । तर, आएको अफर उनीहरुले छाडे ।
अफर आएको फिल्मको लागि पुष्पले ३० लाख पारिश्रमिक मागेका थिए । तर, दुबैले फिल्मको कथा राम्रो नलागेर छाडेको बताए । आँचलले भनिन्,– मलाई सिधै अफर आएको थिएन । पुष्पजीलाई आएको थियो । उहाँले ‘ओके’ भनेपछि म पनि स्क्रिप्ट पढ्ने सोचमा थिएँ । उहाँले रिजेक्ट गरेपछि मैले पनि चासो देखाइनँ । यद्यपि, फिल्मको वानलाइन स्टोरी भने मलाई थाहा थियो ।’ दुईले राम्रो टिम र स्क्रिप्टबाट अफर आएको खण्डमा पुनः सहकार्य हुने बताएका छन् ।
पुष्पले फिल्म गरेको खण्डमा आँचलले पनि फिल्म गर्ने, पुष्पले नगरे आँचलले पनि नगर्ने यो त आँचलमा परिपक्वताको अभाव पो देखियो नि ।
यो पनि पढ्नुहोस् : लहरोले पहरो तान्दा– गलबन्दी चोरी काण्ड
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गीत हो गलबन्दी । धेरैले रुचाईएको गीतको रुपमा मात्र हैन गीतका सर्जक प्रकास सपुतलाई लागेको चोरीको आरोपले पनि चर्चामा छ । धेरैले प्रकाशको प्रगतिले जलेर यो आरोप लागेको भनेका छन् भने केहीले गल्ती गरे कि क्या हो भनेका छन् । नेपाली ग्रामीण समाजमा गाइने रोधी परम्परामा आधारित उक्त लोकभाकालाई यति बेला भने चोरीको बात लागेको छ । सपूतको गीत २०४८ सालमै रेकर्डिङ गरिएको गायक शम्भु राईको ‘आऊ नाचौं साथी हो’ सँग लय मिल्न गएको आरोप लागेको छ ।
गीतको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । गीतलाई लिएर शम्भु राईले उजरी दिएका छन् । जसमा प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार कार्यलयले अपरि छलफलमा कुरा मिलाउन बुधबार सम्मको समय दिएको छ । अझ जातिय विषयलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । गीतलाई चोरी आरोप आइरहँदा गीतलाई लिएर जातियताको गन्ध मिसाइएको छ ।
सोही विषयलाई लिएर फेसबुकमा एक प्रयोगकर्ताले गरेको नकरात्मक टिप्पणी अहिले भाइरल भइरहेको छ । सुवास मंगोल नामक प्रयोगकर्ताको टिप्पणीको तस्बीर सहित गायक शिव परियारले फेसबुकमा पाँच वाक्य लेखेका छन्–
१) पहिला बल लगाएर तल झार्न खोज्छ बलमा पनि सक्दैन !
२) बुद्धी लगाएर तल झार्न खोज्छ त्यसमा त झन् सक्दैन !
३) अनि सम्बन्धित विधामा अज्ञानी छ कमजोर छ भनि दुस्प्रचार गरेर झार्न खोज्छ त्यसमा त झन् फेल नै खान्छ सक्दैन !
४) त्यसपछि चरित्र हजार मान्छे संग जोडेर चरित्र हत्या गरेर जात देखायो भनेर तल झार्न खोज्छ सत्य कुरा पो सत्य हुन्छ झुट कहिल्यै
सत्य हुँदैन यो त झन् सक्दै सक्दैन
५) अन्तिममा तल झार्ने सबै बाहना सकिएपछि सके सम्म यस्तै गरि अथवा पछाडी आफ्ना दुई चार आसेपासे संग दमाई ,कामि ,हैसियत
भनि हाहाहाह गरेर हाँसेर खिल्ली उडाएर कुरा काटेर तल झार्ने प्रयास गर्छ !
हो म बाँचेको समाज यस्तै छ ! यस्ताहरुबाट के आशा गर्ने ? यस्तो तत्वहरुको बिरुद्दमा अब चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन !
मलाई मेरो जात प्रति सधैं गर्व छ !
उनको उक्त पोष्टमा समाचार तयार पार्दासम्म तीन हजार भन्दा बढी कमेन्ट आइसकेको छ । अधिकांक कमेन्टहरु शम्भु राईको आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै सहानुभुतीका कमेन्टहरु पनि आएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर कलाकार जितु नेपालले सामजिक सन्जालबाट अरुको अपमान गर्नु गाली बेईजत गर्नु पनि अपराध हो तुरुन्त यस्ता घटीया कार्यहरु बन्द गरौ भनेका छन् ।
फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘चित्त न बुझे आफुलाई लागेकोकुरा सब्य भाषामा भन्न सकिन्छ, कमेन्ट गर्न सकिन्छ । तर अरुको जातलाई लिएर गाली गर्न अपमान गर्न पाईन्न। २२ औं शताब्धीको उच्चतम प्रबिधीमा रमाउने अनि सोच चांही पुरानै राख्ने..? केहो जात भनेको..?’ उनले थप लेखेका छन्–‘काम,योग्यतार क्षमताले मानिस तलमाथी हुनसक्छ तर जातले कोहिपनि ठुलो र सानो छैन। आजै देखी ठुलो जातको भन्ने घमन्ड छोडौं । सामजिक सन्जालबाट अरुको अपमान गर्नु गाली बेईजत गर्नु पनि अपराध हो तुरुन्त यस्ता घटीया कार्यहरु बन्द गरौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : हिरो र भिलेन बीचको टक्कर हराएको फिल्म
फिल्मी फण्डा । पछिल्लो समय रजतपटका नायक पात्रहरू मुक्काको भरमा एक्लैले १० जना भिलेनलाई ढाल्न असमर्थ छन् । न उनीहरू नायिकासँग प्रेमिल वातावरणमा गएर गीतमा नाच्छन् । न पहरामा गएर दशौँ पटक आउने प्रतिध्वनि निकाल्ने गरि चिच्याउँछन् । नेपाली गाउँ–शहर र चोक–गल्लीमा भेटिने पात्रहरूको जीवन्त अभिनय गर्छन् । वनावटी अभिनयको साटो परिचित जस्तो लाग्ने पात्रको कथामा वास्तविक अभिनय गर्छन् ।
खाइलाग्दो जीउडाल, चकलेटी अनुहार, लामो कपाल, स्टाइलिष्ट पहिरन हिरो हुन चाहिने यो बलिउडबाट भित्रिएको ट्रेडमार्क बदलिंदैछ । लूट फिल्मको ‘हाकु काले’ ‘गोफ्ले’, कबड्डी फिल्मको ‘काजी’, टलकजंग भर्सेस टुल्के फिल्मको ‘टुल्के’, पशुपति प्रसाद फिल्मको ‘भस्मे डन’, जात्रै जात्रा फिल्मको ‘फणिन्द्र’ जस्ता चरित्र दर्शकका लागि अविस्मरणीय बन्दा एकै जनाले एक हुल समूहलाई सजिलै पछार्ने पुरानो शैलीमा परिवर्तन आएको हो । सामाजिक परिवेशकै पात्रहरूको कथामा एकपछि अर्को फिल्म आउन थाल्दा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, खगेन्द्र, लामिछाने, विपिन कार्की लगायतका रंगकर्मीहरू सशक्त फिल्मी अभिनेताका रूपमा उदाएका छन् ।
दर्शकले पनि नायक केन्द्रित नभई चरित्र प्रधान फिल्म रुचाउन थालेका छन् । पहिले रजतपटका फिल्महरुमा नायक र खलपात्रबीच टक्कर हुन्थ्यो, आज सामाजिक द्वन्द्व र परिवेशमा पात्रहरूको चलखेल हुन थालेको छ । निर्देशकहरु पनि चरित्र प्रधान फिल्म बनाउन केन्दीत भएका छन् । चलि आएको भन्दा भिन्न धारमा एकपछि अर्को चरित्र प्रधान फिल्म बन्न थालेपछि नयाँ अनुहार लोकप्रिय भएका छन् । उनीहरु चकलेटी र स्टाइलिष्ट छैनन् तर, फिल्ममा पात्रलाई न्याय गर्न खप्पिस छन् । रंगमञ्चबाट खारिएर आएका त्यही अनुहारहरूले नेपाली फिल्मलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । परिणाम, अनावश्यक मारपिट र नाचगान घट्न थालेका छन् । मौलिक नेपाली फिल्महरूले शहरका मल्टिप्लेक्सहरूमा हिन्दी फिल्मको बोलवालामा धावा बोल्न सक्षम छन् ।
कुनै वेला शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, राजेश हमालहरूलाई निर्माता–निर्देशकहरू आफ्नो फिल्ममा अनुबन्ध गर्न पालो कुर्थे, अहिले त्यो स्थान रंगमञ्चबाट उदाएका कलाकारहरुले लिएका छन् । पहिले नायकहरु फिल्मको लागि भ्याई नभ्याई गर्थे, अहिलेकाहरू आफू सुहाउँदो कथा र चरित्र नभए फिल्म अस्वीकार गर्छन् । कुनै वेला पोष्टरमा स्टार कलारको अनुहार हेरेर फिल्म चल्थ्यो, आजका दर्शक चरित्रप्रधान फिल्म मन पराउँछन् । सन्तुष्टिको ग्यारेन्टी भएमात्र फिल्म चल्छन् ।
कुनै समय विराज र निखिलका फिल्महरुले एक्शनकै भरमा दर्शक तान्ने सामथ्र्य राख्थे । दर्शकको फिल्मी स्वादमा परिवर्तन आएको छ । धमाकेदार फाइटमा अब्बल रहेर नामी बनेका नायकहरुका फिल्मले दर्शक तान्न सकिरहेको छैन । नायकद्वय विराज भट्ट र निखिल उप्रेतीको कमब्याक सम्झन लायक नहुन यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । वास्तविक चरित्र पर्दामा, पुरानो छवि ‘फेज आउट’ भएको मान्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : विराजको डेब्युमा विवादै विवाद
फिल्मी फण्डा । विराज भट्टको निर्माण तथा डेब्यु निर्देशनमा तयार भैरहेको फिल्म ‘साङ्लो’को छायाकंन भइरहेको छ । निर्माणको लागि टिमअप गदैगर्दा विराज विवादमा आएका थिए । गत वैशाखमा फिल्मका प्राविधिक शंकर पाण्डे र उनीबीच हात हालाहाल भएको थियो । चलचित्र प्राविधिक संघको मध्यस्थतामा पाण्डे र भट्टबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा भट्टले गल्ती महसुस गर्दै माफी समेत मागेका थिए ।
फिल्मको विषय कुरा हुँदा विवाद उत्पन्न भएपछि उनले पाण्डेमाथि मुक्का हानेका थिए । पाण्डे तत्कालिन समयमा फिल्मको प्रोडक्सन डिजाइनरको जिम्मा लिएका थिए । सम्झौतापत्रअनुसार पुसबाट फिल्मको छायांकन सुरु गर्ने भन्ने थियो । तर, चार महिनासम्म पनि छायांकन सुरु नभएपछि पाण्डेले काम छाड्ने बताए । पाण्डेको कुरा सुनेर आवेगमा आएका विराजले टाउकोमा मुक्का हानेका थिए । विराजले फिल्म छाड्दा आफूले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता मागेका थिए । तर, पाण्डेले ४ महिनादेखि आफ्नो समय त्यत्तिकै गएकाले रकम फिर्ता नगर्ने भनेपछि विराज आक्रोशित बनेका थिए । उक्त प्रकरणमा फिल्म विवादमा आएको थियो ।
फिल्मको हाल सुदुरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा छायाकंन भैरहेको छ । फिल्म फेरि विवादमा तानिएको छ । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले १० लाख रकम सिनेमालाई दिए पछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले फिल्मको टीमलाई खान, बस्न र यातायात खर्चका लागि बजेट छुट्टयाएको बताएका छन् । उनले फिल्ममा अभिनयसमेत गरेका छन् । तर, अध्यक्ष ओझाले सबैको सल्लाहमा ‘पर्यटन प्रवर्धन’ शीर्षकमा उक्त रकम फिल्मलाई दिइएको बताएका हुन् । फिल्ममा विराज भट्टको निर्माण, निर्देशन तथा अभिनय पनि रहेको छ । यस विषयमा अभिनेता तथा निर्देशक भट्टको धारणा भने बाहिर आएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : महँगो पारिश्रमिक सस्ता कलाकार
फिल्मी फण्डा । रजतपटका कलाकारहरुको पारिश्रमिक कति होला ? बजारमा अनेकन हल्ला फैलाइन्छ । पारिश्रमिकको ग्राफको राम्रै चर्चा हुने गर्दछ । बाहिर हल्ला गर्ने एक थरि रकम हुन्छ अनि वास्तविक पारिश्रमिक अर्कै हुने खबर पनि समय समयमा नआएको होइन । रजटपटका नायकको हकमा पारिश्रमिक ४०–५० लाख र नायिकाको हकमा १५–२० लाखसम्म पारिश्रमिक बुझेको खबर आउँछन् । फिल्मको घोषणादेखि नै सुरु हुन्छ, फलानो हिरो, हिरोइनलाई महँगो पारिश्रमिक दिएको प्रचारबाजी । एक हिसाबले फिल्म पब्लिसिटीको माध्यम नै बन्छ पारिश्रमिक ।
दर्शकलाई भने यस्ता प्रचारसँग सरोकार नै हुँदैन । नियमित दर्शकहरु भने कलाकारको अभिनयमा पनि खोट लगाउन सक्छन् । यतिको मोटो रकम लिएर यस्तो अभिनय गरेको भनेर फिल्म हल बाहिर दर्शकले नै कुरा गर्ने गर्दछन् । दर्शक हलमा नयाँ अपेक्षा सहित पुगेको हुन्छ । दर्शकको चासोतिर निर्माता, निर्देशकको ध्यान पुगेको देखिदैन । कस्तो भूमिकाका लागि कुन कलाकारलाई छनोट गरिएको हो ? त्यस भूमिकाका लागि ऊ कत्तिको योग्य होला ? नायक र नायिकाको जोडी पर्दामा कस्तो देखिएला ? पात्रको चरित्रलाई कलाकारले न्यान गर्न सक्छन वा सक्दैनन् ? न त कलाकारले दर्शकको अपेक्षामा न्याय दिने काममा ध्यान पुर्याउन सकेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकै कारण वा फ्यान फलोइङ धेरै देखेकै कारण तिनलाई लिँदा दर्शक पनि सोहोरिएर हलमा आउने निर्माता, निर्देशकलाई ठूलो भ्रम छ । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु वा भाइरल हुनुका कारण खोज्न र उक्त व्यक्ति फिल्ममा अनुबन्ध गर्दा के कस्तो लाभ हुन्छ त्यो सोच्ने तर्फ निर्माता, निर्देशकलाई सोच्ने समय छैन । टीकटकका भाईरल व्यक्तिहरुको अभिनय रहेको फिल्म होस् या तरकारीवालीका नाममा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी कुसुम श्रेष्ठले खेलेको फिल्म होस् रजतपटमा हिट हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुँदैन ।
त्यस्तै, फिल्मबाट नै स्टार बनेका कलाकार पारिश्रमिकको मामलामा कुनै सम्झौता गर्दैनन्, तर काम चाँही फितलो गर्छन् । चल्तिका कलाकारको अभिनय हेर्न दर्शकले हलसम्म धाइरहनु नै पर्दैन । समाजिक सञ्जालमा उनीहरुलाई फलो गरे पुग्छ । त्यँही भेटिन्छ, उनीहरुको अभिनय कला । उनीहरुको बारेमा जान्न यूट्यूब सर्च गरे धित मरुञ्जेलका सामग्री पाइन्छ । सेलेब्रेटी सम्बन्धि सामग्रीहरुले यूट्यूबमा लाखौँ भ्यूज बटुल्छ, उनै सेलेब्रेटीका अभिनयले हलहरुमा हावा खान्छन् ।
व्यस्त कलाकारको समय तालिकामा फिल्मको सुटिङ तय गरिँदा पनि प्रि–प्रोडक्सनका लागि जति समय चाहिने हो त्यो नपुग्दै फिल्म खिच्न हतार हुन्छ । म्यूजिक भिडियोमा चल्तिका सेलेब्रेटीका माग उच्च छ । फिल्मबाट बचेखुचेको समय उनीहरु म्यूजिक भिडियोमा रहेको माग पुरा गर्न व्यस्त हुन्छन् । दर्शकको सहज पहुँचमा कलाकारको अभिनय पुगेको छ । फिल्ममा चर्को पारिश्रकि लिने कलाकारका कला जहाँतही भेटिदाँ सस्ता बन्न पुगेका छन् । महँगा कलाकारहरू बढी पैसामुखी हुँदै जाँदा कामप्रतिको सम्मान र मिहिनेत हराउँदै गएको छ । यसले पनि फिल्म बजारलाई खुम्चाइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दुई नेपालीलाई तीन बलिउड फिल्मले घेर्दै
फिल्मी फण्डा । यस बर्ष गत बर्ष भन्दा कम मात्रामा फिल्म प्रदर्शनमा आउने निश्चित छ । शुटिङ सिजनमा पनि कम मात्रामा कम फिल्महरु फ्लोरमा रहेका छन् । नेपाली फिल्मको संख्या कम हुँदा विदेशी फिलमको दबाब नेपाली फिल्मले प्रदर्शनको समयमा झेल्नु पर्नेछ ।
विदेशी र स्वदेशी फिल्मको क्ल्यासको दिन आगामी साउन ३० लाई मानिएको छ । फिल्म ‘दयारानी’ जेठ १० गतेबाट सरेर यो मितिमा पुगेको छ । यस्तै विकास राज आचार्यकृत फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ले पनि साउन ३० लाई नै प्रदर्शनको मिति तय गरेको छ । दुई नेपाली फिल्मको प्रदर्शन मिति एकै दिन हुन पुगेको छ । यहि मितिमा अर्थात् अगस्ट १५ तारिखका दिन वलिउडका प्रभावशाली अभिनेता प्रभाषको महत्वकांक्षी फिल्म ‘साहो’ प्रदर्शन हुँदैछ । यहि मितिमा बलिउडका स्टार द्वय अक्षय कुमार र जोन अब्राहमको फिल्म पनि आउँदैछ । अक्षय कुमारको फिल्म ‘मिसन मंगल’ र जोन अब्राहिमको ‘बाट्ला हाउस’ पनि यही मितिमा प्रदर्शन हुनेछन् । नेपाली र बलिउडका गरि सोही मितिमा पाँच ओटा फिल्महरु हलमा लाग्नेछन् ।
साउन २९ अर्थात् अगस्ट १४ तारिखका दिन दुई हलिउड फिल्म दि एङ्ग्रि वर्ड २ र ब्लाइण्डेड वाई दि लाइट प्रदर्शनमा आउँनेछन् भने साउन ३१ अर्थात १६ अगस्टका दिन गुड ब्वाइज, दि इन्फमर लगायत नौ ओटा अन्य फिल्महरु प्रदर्शनमा अउनेछन् । नेपालमा बलिउड फिल्मले हलिउडको तुलनामा धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
विदेशी फिल्मदेखी भाग्नु नेपाली फिल्म निर्माण युनिटको नियति जस्तै भएको छ । चल्तिका फिलमहरुलाई पनि शोज् कटाएर विदेशी फिल्मको लागि मैदान खाली गराउने हलवालाहरुको नियति नै रहेको छ । विदेशी फिल्मसँग प्रदर्शन हुँदा व्यापारमा असर गर्ने हुँदा आफू सुरक्षित हुन निर्माताहरु प्रदर्शन मिति हेरफेर गर्ने गर्दछन् । विदेशी बलिउड फिल्मको डरमा दयारानीले अर्को पटक प्रदर्शन मिति हेरफेर गर्नेछ वा हजार जुनी सम्मले पनि सेफ ल्याण्डिङ गर्न अर्को मिति तय गर्नेछ, त्यो भने साउन ३० अघि नै थाहा हुनेछ । यसअघि वितरक कम्पनीले आफ्नो खुशी अनुसार विदेशी फिल्म वितरण गर्दै आएका थिए ।